खुशीलाई बिजयराजको प्रेमपत्र - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
खुशीलाई बिजयराजको प्रेमपत्र
जिन्दगीका अशिम प्यारका लहरहरु, मेरो समिपमा भएका वा त्यो क्षितिज पारी बादलमा भएका सबै संगमका रागहरु केबल तिम्रो नाममा । मेरो प्रेमले भरिएका भावपुर्ण शाब्दीक पुष्पगुच्छारुपी भाबनाहरु यो सात समुन्द्रपारीको देशबाट तिमीप्रति समर्पण । जीवनलाई रंगीन बनाउन जरुरीपर्ने सबै रगंहरु तिम्रो नाममा अर्पण गर्दै आज केही शब्द यो प्रेम पत्र मार्फत तिम्रा लागी ब्यक्त गर्दैछु ।
खुशी, आज तिमिलाई यो पत्र कोर्दै गर्दा म दोहाको सुन्दर ठाँउ कर्नेसको म्युजियम पार्क माथिको अग्लो ठाउँबाट समुन्द्रपारी देखिने त्यो सिटि सेन्टरका गगन चुम्बी महलहरुलाई हेर्दैछु । किन थाहा छ खुशि ? जिन्दगीमा सुन्दरता निकै कम चिजहरुमा भेटिन्छ रे । सायद मैले त्यो ठाउँको सुन्दरतालाई तिम्रो सुन्दरतासँग जोडेर तिमि मेरो नजिक मेरो आँखा वरीपरी नै भएको आभाष गर्दैछु । हुन त म आज यो पत्र लेख्नको लागी मात्र यहाँ आएको होईन जब जब तिम्रा यादहरु आउँछन अनि म यही पार्कमा बसेर केही घण्टा रमाउँने गर्छु । अझ यो त झन प्रेमको महिना तिम्रो याद र यो ठाउँ त मेरा लागी निकै आनन्ददायी लाग्छ ।
अंग्रेजी क्यालेण्डरको १४ फेब्रुअरी आजको यो दिन मैले मेरो जीवनको खास समय सुरु गर्दैछु खुशी । आज मैले अचानक तिम्रो नाममा यो प्रेम पत्र लेखेर म मेरो खास जिबन सुरु गर्दैछु भन्दा तिम्रो आँखाबाट आँशु खस्छ वा झन् भएको पे्रम पनि मरेर जान्छ त्यो मलाई थाहा छैन । तर तिमीले यो प्रयासलाई मेरो हिम्मत सम्झ वा दुस्साहास दुबै स्वीकार्य छ तर सुरुवातमै यो बिन्ती गर्छु माया गर्दीनौ भने घृणा चाही नगर्नु है ।
माया गर्नेहरु का लाागी हर मौसम मायाले भरिएको हुन्छ, त्यसैले मेरो पनि हर मौसम मायालेनै भरिएको छ किनकी म तिमिलाई प्रेम गर्छु खुशी । भलै तिमीलाई मैले गर्ने मायाको आभाष होला नहोला ।
मायामा खुशी भेट्नेहरुको दिन आजको दिन कुनै पनि हिसाबले अर्थपुर्ण रहन्छ खुशी । यही अर्थपुर्ण दिनलाई मैले आज मेरो प्रेमको बिजारोपण गर्ने दिनको पहिलो घडी सम्झेको छु । बीच समुन्द्रको छालहरुले तिम्रा यादहरु सात समुन्द्रपारीबाट हुत्याएर ल्याईदिन्छन । अनि म मौनतामै आफ्नो प्रेम संचय गरेर राख्छु किनकी मायाको संसारमा मायाकै अभाब नहोस् भनेर । प्रिय खुशी मायाका भाबहरु कसरी सुरु हुन्छन् त्यो त मलाई थाहानै छैन अझै यो सम्म भनौ कि रोमियो जुलियट र लैला मज्नुका प्रेम अध्यताहरुले पनि ब्यक्त गर्न सकेनन् होला तर तिमी प्रति आज मेरो मनमा जुन प्रेमको विजारोपण भएको छ नी त्यो विजारोपणले अर्को रोमियो जुलियटलाई जन्म दिने भाबना प्रति प्रेरीत गरेको महसुस गरेको छु ।
मेरो मनले त आज पनि के के सोचिरहेको छ तिमि प्रति यो पत्र लेख्दै गर्दा । धेरै डर, थोरै खुशी, मुटुको कम्पनले लेख्ने आंैलाहरुको कम्पन पनि बडाईदिएको छ । शरिरमा रक्तसञ्चार अनि श्वास पनि लामो लामो फेरीरहेको छु । अहिले म भएको पार्कमा जतिपनि छन् सबै मायाका जोडीहरु छन् म त केबल एक्लो बर बनिरहेको छु तर मेरो साथमा तिम्रो याद यति हाबि भएको छ कि त्यो कुराको महसुस साथमै भएका प्रेमील जोडीहरुले गर्न सकिरहेका छैनन् ।
आज म किन डराई रहेछु त्यो पनि थाहानै छैन खुशी । तिम्रो त नामै खुशी छ तीमी त सँधै खुशी रहन्छौ होला तर आज यो पत्र लेख्दै गर्दा तिमि सँग डराईरहेको यो मान्छे तिमि बिना एक धड्कनको पनि कल्पना गर्न सकिरहेको छैन डियर । तिमि सँग कसरी नजिक भए म त्यो त तिमि आफै जान्नु किनकी मायाको अभाब मलाई थियो तर प्रभाब तिमिले पारेकी थियौ । तिमीले बोलेका हर शब्दमा मिठासको आभास मिल्छ तिमिले चाल्ने हर पाईलामा गन्तब्यको लक्ष्य भेटीन्छ अनि तिमिले गर्ने हर ब्यबहारमा आत्मियताको रारा अनि फेवा भेटिन्छ । तिमिले फेर्ने हर श्वासमा मैले मेरो जीवन भेटेको हुन्छु, अनि तिमिले हास्ने हर मुस्कानमा मैले मेरो खुशी भेटेको हुन्छु ।
जव तिमि थोरै पनि निराश देख्छु मेरो मुटुमा बैशाख १२ चल्छ अनि त्यही बिचमा तिमी हाँसेर समिप आईदिन्छौ नि तब त्यो कालो बादल हटिदिन्छ र सफा भई दिन्छ सबै । अनि तिम्रो मुस्कानमा म पनि थोरै हासेर तिमि लाई थप खुशी देख्ने बाहानामा दाँत देखाईदिन्छु । तिमि नि मेरो दातको बयान गर्न शुरु गर्थौ नि है । याद छ तिमिलाई खुशी यी सबै कुरा ? भन त खुशी यो सबै कुरामा माया छ कि छैन ? प्रेम छ कि छैन ?
खुशी आज खै मलाई केही भएको महसुस गरीरहेको छु । शब्दहरु यतिधेरै छन् तर निकै अड्कलेर लेख्नुपरे जस्तो अनुभुति गरीरहेको छु । तिमिले मलाई घण्टौ कुरेर मेरो प्रतिक्षा गरेका ति दिनहरु याद गर त म तिम्रो सामु आईपुग्दा तिम्रो ओठमा कति खुशीको बर्षात सुरु हुँन्थ्यो । नेपालमा राजनितिक आन्दोलनले बन्द हुँदा गाडी चलेका थिएनन् तर तिमि घण्टौ लामो पैदलयात्रा गरेर खुट्टामा घाउ बनाएर भएपनि मलाई भेट्न आउँथ्यौ र बेलुका भन्ने गथ्र्यौ हेर त म तिमिलाई भेट्न आउँदा मेरो यो हालत भनेर घाउ देखाउँथ्यौ । म भन्थे किन आएको त ? तिमि हास्दै भन्ने गर्थौ तिम्रा लागी यो भन्दा ठुलो चोट सहन सक्छु । तिमिले यसो भनिरहँदा मेरो खुशकिो सीमा कहाँ सम्म फैलिन्थ्यो त्यो मलाई नै थाहा हुन्न थियो ।
खुशी ति पुराना दिनहरुलाई आज यो समुन्द्री किनारबाट फर्केर हेरीरहेको छु । मलाई तिमिले कुरेर बसेका ति दिनहरु सम्झिरहेछु । तिमिले पर्खेर बसिरहदा अनि म ढिला आउँदा तिमिले गर्ने गाली अनि आधा घण्टा सम्म लगाएर फकाउने मोरो काम । कान समाएर सरी भन्दा तिमिले मेरो नाक समाएर नट्टी ब्वई भनेर मलाई माफी दिएर खिस्स हाँसेका ति दिन हरु आँखा वरीपरी घुमिरहन्छन । चिसोको मौसमको बेला दुबै जना ईअर फोन लगाएर तिम्रै मफलरले कान छोपेर गित सुनेर बसेका दिनहरु याद आउँछ तिमिलाई ? के त्यो प्रेम थिएन ? हुनत मैले तिमिलाई बुझन सकिन वा तिमिले मलाई हामी बीच यति धेरै माया हुँदा हँदै पनि हामी प्रेममा जान नसक्नु लाई के भनेर बुझौ म ?
प्रिय खुशी मलाई यो पत्र लेखिरहँदा एउटै कुराको चिन्ताले सताईरहेको छ । तिमिले यो मेरो प्रेमील पत्र पढीसकेपछि तिम्रो प्रतिक्रिया के आउँनेछ भनेर । हुनत मैले तिमिलाई ति दिनहरुमा पनि तिमि मेरो मात्रै हो है खुशी भनेर भन्थे । तर तिमिले त्यो कुरालाई मैले जिस्क्याएको जस्तो ठानेर म त अरुकै हुँने हो भनेर भन्थ्यौ के तिमि साँच्चै अरुकै हुँने हौ ? यो प्रश्नले दिने उत्तरको ब्यग्र प्रतिक्षामा छु । मैले यो उत्तरको पर्खाई गरीरहँदा कतै तिमि अरु कसैसँगको सम्बन्धमा त छैनौ नि ? त्यो पनि मेरो अर्को ब्यग्र प्रतिक्षाको जवाफ हँुनेछ खुशी । सायद यो पत्र तिम्रो नाममा पठाएपछि त मेरो निदहराम ब्रत सुरु हुँन्छ होला । के गरु कसो गरुले गर्दा मेरो धड्कनको तिब्रताले मलाई मसानघाट नपु¥याउदै जवाफ देउ है खुशी ।
मायामा मान्छेहरु पागल हुन्छ्न रे आँखा देख्दैनन् रे अनि अरु के के हुन्छ रे आज त्यो सबै मलाई भएको छ । तर म मायामा पागल भएपनि तिमीलाई पाउँन नसकेपनि तिमिलाई एसिड हान्न आउने पे्रमि बन्ने छैन खुशी । तिम्रो सुन्दरता र मौनता लाई मेरो मनको संग्राहालयमा संग्रहित गर्नेछु । तिम्रो सुन्दरता र चंचलातानै मेरो आँखाका लागी न्याय हो खुशी । एउटा कुरा यत्ति याद गर्नु तिमिले फेर्ने श्वास मेरो जीवन हो त्यसैले म बाँच्नको लागी तिमि बाँच्नु पर्छ । तिमी नहुँदा मैले फेर्ने श्वासनै हँदैन खुशी । अन्त्यमा फेरीपनि तिमिलाई मायाका सौगातहरु सुम्पिदै प्रेमले भरिएको यो दिन प्रेम गर्नेहरुको यो दिनको शुभकामना खुशी । चन्द्रमा जस्तो त्यो मुहारमा मेरो प्रेम पत्रले औशीको रात होईन जीवनभरको साथको सुरुवात गरोस ।
उहि तिमीलाई मात्र माया गरीरहने तिम्रो नट्टी ब्वई
भरतपुर ७ चितवन, हाल दोहा कतार